एक आदि–विद्रोहीको सम्झना – Sourya Online
एक आदि–विद्रोहीको सम्झना
सौर्य अनलाइन २०७० जेठ ११ गते २:४० मा प्रकाशित
एक थोपा पानीले समुद्रमा आफ्नो पहिचान गुमाइदिन्छ । यसको विपरीत एउटा मानिसले समाजमा आफ्नो पहिचान कायम राख्छ । मानिस केवल समाज विकासका लागि जन्मेको होइन । मानिस आºनै विकासका लागि जन्मेको हो । समाज मानिसको विकासमा बाधक होइन, साधक हुनुपर्छ । गौतम बुद्धले तत्कालीन असमान, परतन्त्र र बाधक समाज व्यवस्थाविरुद्ध जसरी धाबा बोलेका थिए त्यो आज २५ सय वर्षपछि पनि आश्चर्यजनक र मननीय छ । गौतम बुद्धलाई ‘भगवान्’ मानेर भित्तामा झुन्याउनु वा पूजा गर्नुको साटो उनीबाट प्रेरणा लिएर अलिक आँटी मान्छे बनेर देखाउनु सायद उनीप्रति साँचो श्रद्धा हुनेछ ।
बहुलवादका गफ गल्ली–गल्लीमा सुन्न पाइने वर्तमान समाजमा विद्रोहका कुरा गर्नु सहज होला । तर, जतिबेला गौतम बुद्धले जन्म लिएका थिए त्यतिखेरको समाज अशिक्षित र पुरातनपन्थी थियो । आँटी बुद्धले त्यो समाजमा मानव समानता र स्वतन्त्रताको शंखनाद गरेका थिए । बुद्धको त्यस शंखनादको कालजयी ध्वनि आज पनि हाम्रो कर्णविवरमा अनुगुन्जित भइरहेकै छ । बुद्धका मूर्तिहरू कुँदिएका कुँदियै छन्, गुम्बा र बिहारहरूको संख्या बढेको बढ्यै छ, विश्वविद्यालयमा बौद्धदर्शनका कक्षा थपिएका थपियै छन् । यो माहोल कसैको प्रायोजित ‘मिसन’का रूपमा चलेको छैन । स्वत:स्फूर्त रूपमा फैलिएको छ । कुनै देश विशेषमा सीमित छैन, विश्वभर विस्तार भइरहेको छ । यद्यपि, हामीले बुद्धका सन्देशलाई आत्मसात् गरेर आफूमा अलिक विद्रोही स्वभाव विकसित गर्न बाँकी छ । हामी बुद्धका वाणीहरू पढ्छौँ भने पनि त्यो आºनो आत्मोन्नतिका लागि होइन, अरुलाई ‘फ्रि एड्वाइस’ दिनका लागि ! यसो गर्दा हामीले आफूलाई चलाख सम्झन्छौं सायद । बौद्धिक विलासको यस्तो कसरत व्यक्तिलाई झन्–झन् दुर्बल र अमानव बनाउन जिम्मेवार छ । बुद्ध एक आदि–विद्रोही थिए । बौद्धिक विलासको लागि त उनी एक शब्द बोलेनन् । उनले जे बोले त्यो मानवलाई महामानव बनाउने ध्येयले बोले । उनले जे गरे त्यो मक्किएको समाजव्यवस्थालाई जगैदेखि पुननिर्माणका लागि गरे ।
बुद्धले अछुत भनिनेहरूलाई संघमा प्रवेश दिएर जातिप्रथाको अन्त्य गरे । महिलाहरूले पनि आध्यात्मिक अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ भनी बाटो खुला गरिदिए । निर्वाण प्राप्त गर्न व्यक्तिको आºनै प्रयास पर्याप्त हुन्छ, ‘ईश्वर’को कृपा आवश्यक छैन भनी मानिसलाई ईश्वरको चरणमा दास हुनबाट मुक्त बनाइदिए ।
बुद्धको विद्रोही चेतनाका झिल्काहरू तलका हरफमा अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
अप्प दीपो भव :
सबभन्दा पहिला त गौतम बुद्धले धर्मको ठेकेदारी प्रथा अन्त्य गर्न कदम चाले । उनले उद्घोष गरे–ब्राह्मणहरूले जग्गे थापेर अन्नपात र घिउतेल स्वाहा पार्ने चलन वाहियात हो । मान्छेलाई जजमान अर्थात् पुरेतले जे जे भन्छ त्यही त्यही मान्ने नादान बनाउनु र कहिल्यै कसैले कहीँ नदेखेको ‘ईश्वर’का नाममा जीवन धान्ने खाद्यान्न नष्ट गर्नु कदाचित् तर्कसंगत होइन ।
पुरेत्याइँ प्रथा अन्त्यसँगै बुद्धले ईश्वरको अस्तित्व अस्वीकार गरिदिए– पुरेत वा शास्त्रले यसो भने भन्दैमा विश्वास नगर । तिमी आफैं परीक्षण गरेर हेर ।
के ईश्वरले दुनियाँमा न्याय कायम गराएको छ ? शान्ति कायम गराएको छ ? के ‘ईश्वरको सृष्टि’मा समानता र स्वतन्त्रता छ ? छैन भने केका लागि ईश्वरको गुलामी गर्ने ? मन्दिरको ढोकामा उभिने जो पनि भिखारी हो । मानिस स्वाभिमानी हुनु ठीक हो । ईश्वरसँग धनसम्पत्ति वा समृद्धिको वर माग्नु पनि भिखारी हुनु होइन र ? मानिसजस्तो बुज्झकी प्राणीलाई दिनदहाडै भिखारी हुन शोभा दिँदैन । मुक्तिको कामना गर्नु पनि भिखारीपना हो । मानिस आºनै प्रयत्नले मुक्त हुन सक्छ । ध्यानको अभ्यास गर्दै मनको मैलो हटाएका दिन मानिस स्वत: बुद्ध बन्छ । यो हो स्वाभिमान । बुद्धले भने–अप्प दीपो भव अर्थात् आफूआफ्नै दीपक होऊ ।
अत्तो हि अत्तनो नाथ
बुद्धले भने–तिम्रो मालिक तिमी नै हौ । होसमा रहने कला अभ्यास गरेर, चेतनाको विकास गरेर महामानव हुने या बेहोसीमा रमाउने ओरालो बाटो रोजेर पशुवत् हुने यो तिम्रो छनौटको विषय हो । तिमीलाई उद्धार गर्न स्वर्ग वा बैकुण्ठ लोकबाट कोही शंख–चक्र र चार हातधारी दिव्यात्मा आउने छैन । न त कहिल्यै आएको छ । जसले आफैंमा विश्वास गर्छ र आफूबाहेक यताउति अरू कसैको सहारा खोज्दैन उही व्यक्तिले जीवनको रहस्य बुझ्छ, उही व्यक्ति छिटो आत्मोन्नतिको शिखरमा पुग्छ ।
हजार इच्छाहरू पूरा गर्नुभन्दा एउटा इच्छालाई जित्नुमा अधिक आनन्द हुनसक्छ । त्यसो गरेर त हेर † क्रोधले तिलमिलाएर मुखमण्डल विकृत बनाउनु विचारको दास हुनु हो । क्रोधलाई जितेर शान्त भावले मुस्कुराउन सक्नु विचारको मालिक हुनु हो । यसो गर्दा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य बिथोलिन पाउँदैन । यही बुद्धिमानी हो । मनका चाहनाहरू पूरा गर्न बाहिरी व्यक्ति र वस्तुमा निर्भर रहनु आºनो खुशीको रिमोट कन्ट्रोल अरुका हातमा दिनुजस्तै हो । तिम्रो खुशी तिमीभित्रबाट निसृत हुनुपर्छ । खुसीको सदावहार झरना हाम्रो चेतनाको शुद्धतामा छ । यत् पण्डे तत् ब्रह्माण्डे । ब्रह्माण्डमा जे छ त्यो सबै व्यक्तिभित्रै छ । अणुमा ब्रह्माण्ड समेटिएको छ । केवल हेर्ने सही दृष्टि विकसित गर्नु चुनौती हो । जुन दिन म नै मेरो मालिक हुँ भन्ने ज्ञान हुन्छ त्यस दिन व्यक्तिले भन्न सक्छ —
तीन हातको शरीरबाहिर खुसी खोज्न जान्न म
मेरो अन्तरमनको आनन्द तिमीलाई के अन्दाज !
हाम्रो जीवनको उद्देश्य त बुद्धले जहाँसम्म चेतनाको विकास गरे त्योभन्दा अगाडि सोच्नु हुनुपथ्र्यो । त्यहाँसम्म त बुद्धले यात्रा गरिसके । अब त्यसभन्दा अगाडि बढ्न सक्नुपथ्र्यो । निर्वाण नै चेतनाको विकासको अन्तिम बिन्दु अवश्य हुन सक्दैन । जसरी हावा र प्रकाश सर्वव्यापी छ उसैगरी चेतना सर्वव्यापी छ । मानिसले जुन दिन आफूलाई ‘चेतन अस्तित्व’ भनेर बुझ्छ त्यसदिन उसले सर्वत्र त्यही चेतन तत्वबाहेक अर्थोक देख्ने छैन । अरूमा पनि आफूलाई नै देख्नेछ । ‘मै खाउँ मै लाउँ’जस्ता छुद्र विचारबाट माथि उठ्नेछ । अस्तित्वसँग एकाकार भएका दिन मानिसले मानिस भएर जन्मनुको वास्तविक आनन्द अनुभूति गर्नेछ । यद्यपि, आनन्द सर्वव्यापी हुनुपर्छ । दु:खीहरूको चित्कारका माझ सुखीहरूको आनन्द फिका हुन्छ । समग्र मानव जातिलाई ज्ञानोदय हुने उपाय खोजी गर्नु र सबैलाई दु:खमुक्त बनाउनु उन्नत जीवनको अभीष्ट हुनुपर्छ । बाँच्ने पद्धति यस्तो होस् जहाँ सबैको कर्मको आशय सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय लक्षित होस् । बुद्धत्वको आनन्द एक झलकमा पाए पनि मानिसलाई तदनुरूप आशयका लागि कर्मशील हुन प्रेरणा मिल्नेछ ।
हामी इतिहासलाई लुकाउन माहिर छौँ । वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति एवं सन्न्यासीलाई देखेर सिद्धार्थ गौतम भोगबाट वैराग्यतिर उन्मुख भए । एक रात पत्नी र पुत्रलाई सुतेको बेलामा छोडेर ज्ञानको खोजीमा निस्के । प्रचलित कथाले यही भन्छ । तर, कथामा तार्किकता कम र अन्धभक्ति अधिक छ । २९ वर्षको उमेरसम्म सिद्धार्थ गौतमले वृद्ध, रोगी वा मृत व्यक्तिलाई देखेनन् होला ? भीम राव अम्बेडकरजस्ता विद्वान्ले बुद्धले गृहत्याग गर्नुको पछाडि राजनीतिक कारण खोजेका छन् । शाक्य गणराज्य र कोलीय गणराज्यबीच पानीको विषयमा विवाद चलिरहेको थियो । यही कारणले युद्ध र नरसंहार हुने स्थिति आइपुग्यो । बुद्धका सामु तीन विकल्प थिए : कि त लडाइँमा होमिने, कि मृत्युदण्ड वरण गर्ने या निर्वासित हुने अथवा सर्वस्वसहित सपरिवार समाजबाट बहिस्कृत हुने । पहिलो र अन्तिम विकल्प सहज थिएनन् । सिद्धार्थ गौतमले दोस्रो विकल्प रोजे र निर्वासित भए । यसरी बुझ्दा पनि बुद्धले मानव जातिलाई दिएको योगदान विल्कुलै कम हुँदैन । बरु नयाँ पुस्ताका आँखामा बुद्धको जीवनी तर्कसंगत र विश्वासनीय देखिन्छ ।
सिद्धार्थ सानैदेखि कुशाग्रबुद्धि, चिन्तनशील र मानवीय थिए । गृहत्याग गर्नैपरेपछि उनले निर्वासनलाई नै मानवजातिका लागि उदाहरणीय बनाउने संकल्प गरे । पहिला त परम्परागत तपस्याको अग्निमा आफूलाई तप्त बनाए । ज्यान सुकेर सिट्ठो भयो । तर ज्ञानोदय भएन । उनले मध्यममार्ग अपनाए । खानपिन गर्न थाले । क्रमश: ध्यान गर्ने ऊर्जा शरीरलाई प्राप्त भयो । ‘यही आसनमा शरीर सुकेर जाओस्, हाडमासु गलेर जाऊन् बुद्धत्व प्राप्त नगरी उठ्दिनँ’ यस्तो प्रतिज्ञा गरी ध्यानमा बस्दा आखिरमा सिद्धार्थले ज्ञान प्राप्त गरे । यी काम चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न भएको थियो । पहिला त ध्यानमार्फत एकाग्रता हासिल भयो । शरीर र मन स्थिर एवं शान्त भए । तब प्रज्ञा जागृत भयो । अनित्य, दु:ख र अनात्माको साक्षात्कार भयो । शून्यता अर्थात् प्रतीत्यसमुत्पादको ज्ञान भयो । नि:स्वभावता बुझेपछि उनी दुखमुक्त भए । तब दुखको सागरमा डुबेका मानिसहरूप्रति उनको हृदयमा करुणा जाग्यो । अरुलाई दुखमुक्तिको बाटो देखाउने क्रममा आºनो दु:ख छायामा परिसकेको हुन्छ । बुद्ध दर्शनमा यो दु:खमुक्तिको एक रहस्य हो ।
हामी व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्नमा पनि माहिर छौँ । हामीले सायद सिद्धार्थको यथार्थ कथाबाट निश्चित तथ्यहरू गायब पारिदियौँ र बुद्धले केवल ज्ञान पाउनका लागि घरबार त्यागेका हुन् भनी कथा रच्यौँ । औसत मानिस लकिरको फकिर हुन चाहन्छन् । उनीहरूले हत्तपत्त बुद्धलाई देवत्वकरण गरेर भगवान् बनाइदिए । र, आफू भगवान्को चरणदास बन्नुमा सन्तोष माने । जसले ईश्वरको अस्तित्व अस्वीकार गर्‍यो उसैलाई भगवान्को पगरी गुथाइदिनु कति न्यायिक हुनसक्छ ? बुद्धको नाममा धर्म पनि चल्न थाल्यो, जुन बुद्धको सोचभन्दा विपरीत कुरा थियो । यसरी एउटा महामानवको आशयविपरीत जानु मानिसजस्तो चेतनशील जातिलाई सुहाउने कुरा होइन । बुद्धले त भनेका थिए– मानिस केवल आºनै प्रयासले चेतनालाई परिशुद्ध बनाउँदै एक दिन शुद्ध चैतन्य साक्षात्कार गर्न सक्छ । देवताको कृपा वा कुनै गुरु विशेषको सहायता खोज्नु आवश्यक छैन, हितकारी पनि छैन र यसो गर्नु मानिसको क्षमताको अवमूल्यन गर्नु हो भनेका थिए । बुद्धले समस्त मानव जातिलाई अपार स्वतन्त्रताको स्वाद चखाउन खोजेका थिए । तर, आजको नेपाली समाजमा अनागरिकालाई भिक्षुणी बन्नसमेत स्वीकृति दिइएको छैन । आज बुद्धको अग्लो मूर्ति बनाउने प्रतिस्पर्धा छ, व्यापारको होडबाजी छ, लुम्बिनीको साख कसले लिने भनी महाभारत चलिराखेको छ । बुद्धभन्दा बढी ‘जान्ने’हरू नै बुद्धको उद्देश्य सफल पार्ने मार्गमा समस्या हुन थालेका छन् ।
चन्द्रमा कि औंला
बुद्धले हामीलाई चन्द्रमा देखाएका थिए । हामीले बुद्धको औंला मात्रै देख्यौँ, चन्द्रमातर्फ देखेनौँ । बुद्धले हामीलाई बुद्धत्वतर्फ संकेत गरेका थिए हामीले व्यक्ति मात्र देख्यौँ । हामी बुद्धका भक्त बन्यौँ बुद्ध बन्न सकेनौँ । ध्यान एक घन्टा आँखा चिम्लेर बस्ने कर्मकाण्ड होइन । चीवर लगाउनु, भिक्षु बन्नु या मागेर खानु तत्कालीन समाजका लागि ठिकै थिए होलान् । आज २५ सय वर्षपछिको समाजमा छद्म बुद्ध बन्न खोज्नु अलि बढी नै नौटंकी प्रतीत हुन्छ । के हामी अलिक रचनात्मक बन्न सक्दैनौं ? कुन देश, काल र परिस्थतिमा बुद्धले तदनुरूप भेष बनाउनु सान्दर्भिक मानेका थिए त्यसको अध्ययन गरेर आजको युग सुहाउँदो पहिरन गर्नु र ज्ञानलाई उपदेशमा होइन जीवनमा उतार्नु अधिक बुद्धिमानी होइन र ? चन्द्रमा देखाउँदा औंला पक्रनेले दुख नपाए कसले पाउँछ ?
विख्यात बौद्ध लेखक भदन्त आनन्द कौसल्यायन भन्छन्– बुद्ध आजको विकसित समाजमा पैदा हुन्थे भने उनले भिक्षुहरूलाई ब्रह्मचर्यको कठोर व्रत पालना गर्ने नियम बनाउने थिएनन् । सुरक्षित यौन सम्बन्धले आत्मविकासमा बाधा पुर्‍याउँदैन । आत्मोन्नति यौनभन्दा धेरै मास्तिरको अवस्था हो । चेतनाको आनन्दका सामु यौन सुख फिका हुन्छ र स्वत: छुट्छ । हामीले बुद्धको आशयलाई पक्रनु बुद्धिमानी हो बुद्धकाजस्तै गेरुवस्त्र समातेर बस्नु मूढता हो ।
बुद्धको अध्यात्म भूमि
नेपाल बुद्धको अध्यात्म भूमि हो । बुद्ध हाम्रो आºनो माटोका उपज हुन् । उनका शिक्षाहरू, उनले बताएका कालजयी वचनहरू र समुन्नत जीवन पद्धतिका सुपरीक्षित तौरतरिकाहरू पढ्न–बुझ्नलाई अब हामीले विदेशीले लेखेका पुस्तक खोज्न पर्नु, समुद्रपारि डिजाइन गरिएका वेबसाइट चाहार्न पर्नु ठूलै दुर्भाग्य हो सायद । एक से एक बौद्ध विद्वान् स्वदेशमै पैदा होऊन् । शान्तिको देश नेपाल अध्यात्म–भूमिका रूपमा विश्वभरि विख्यात होस् अनि संसारका कुना–कुनाबाट बौद्ध दर्शन पढ्न–बुझ्न र तिनलाई जीवनमा अभ्यास गरिएको शान्तिप्रियता अवलोकन गर्न नेपाल आऊन् । आजसम्म यति त भइसकेको हुनुपथ्र्यो, कम्तीमा पनि । अगणित मानिसहरूले कलमजीवी, बुद्धिजीवी या सूचनाजीवीको परिचय बनाएका छन्, बुद्धको भूमि नेपालमा धेरै होइन केही मानिसले अध्यात्मजीवीका रूपमा पहिचान बनाउन वाञ्छनीय छ । सायद यसको समय आइसकेको छ । भौतिक समृद्धिले मानव समाजलाई निरन्तर संकट र आतंकतिर धकेल्दै गइरहेको स्थिति अहिले छ । आध्यात्मिक समृद्धि भएमा विश्व–व्यवस्थाको कायापलट हुन सक्छ । कम्तीमा यही आशा बाँकी छ ।